Isikole samabanga aphansi - iBLI Isikole solimi eCanada
Izinhlelo ZonyakaZithokozise futhi ufunde ulimi olusha
I-BLI Inikezela NGOKUGUQUKA KAKHULU KWAMAHHALA WABUFUNDI BABASHAI-FLAP | Izinhlelo Zonyaka
I-BLI inikeza uhlelo lwekamu olumangalisayo ngesikhathi sentwasahlobo, ihlobo nobusika lapho bonke ababambiqhaza bezoba nesikhathi esimangalisayo endaweni ephephile nephephile.
Ngesikhathi bonke abaqeqeshi befunda isiNgisi noma isiFulentshi, bayojabula, benze abangane emhlabeni wonke futhi bajabulele amadolobha afana neMontreal, Quebec, Toronto, Niagara Falls, e-Ottawa nezinye izindawo ezinhle eCanada.
Ukuphepha kanye nempilo yamakamu kuyinto ebaluleke kakhulu kithi. Nomaphi lapho izingane zakho zikhona ziyohlala zigadwe futhi zizothola ukwesekwa okudingekayo ukuze ziphile iholide lokufunda elingcono kakhulu lempilo yazo.
Ukuxhuma nabanye abafundi abavela kuwo wonke umhlaba, amakamu azokwenza ubungani obumangalisayo futhi afunde ngamanye amasiko amaningi ngenkathi enza isiNgisi noma isiFulentshi ndawonye.
Uhlelo Lwethu Lokwenza umsebenzi luzoqinisekisa ukuthi abahleli bamakhampasi bakha izinkumbulo abazazisayo impilo yabo yonke njengoba uhlangana futhi ufunda ndawonye endaweni ethokomele futhi ejabulisayo.
Izifundo zolimi azikaze zijabulise kakhulu!
Izinhlelo ze-BLI Junior zenzelwe abafundi abancane abaneminyaka engu-7-17.
Uhlelo lwethu lwe-FLAP (Uhlelo lolimi lwangaphandle) luhlala kumaviki amabili kuya kwayisithupha
Imisebenzi yansuku zonke kanye nokuhambela ngempelasonto kuyingxenye yezinhlelo zethu
Bonke abasebenzi bethu abaqeqeshiwe bazoqinisekisa ukuthi abafundi baphephile futhi bayakujabulela ukuhlala kwabo.